December 2021 - Nepali in Australia
भक्तपुरमा ४ तला माथिवाट १५ वर्षकी युवती खसेर मृ’त्यु
December 31, 2021 autherLeaveaComment on भक्तपुरमा ४ तला माथिवाट १५ वर्षकी युवती खसेर मृ’त्यु
काठमाडौ । भक्तपुरमा रातिको समयमा चार तले घर’बाट १५ वर्षकी युवती खसे’की छन् । उनको उपचारका क्रममा अस्पताल’मा नि’धन भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० कमलविनायक बस्ने हरिनारायण सितिखुकी १५ वर्षीया छोरी सुनेना’को मृ’त्यु भए’को हो । उनी रातिको समयमा घरको चार तला’बाट खसेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले […]
December 31, 2021 EditorLeaveaComment on ‘निसान किक्स’ गाडी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कम मूल्यमा किन्ने मौका !
काठमाडौं । निसान नेपालका लागि आधिकारितक वितरक पायोनियर मोटो कर्पले नयाँ वर्ष विशेष अफर ल्याएको छ । कम्पनीले क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ को अवसरमा निसान विक अफर ल्याएको हो । उक्त अफर जनवरी २ सम्म संचालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर निसानका देशभर रहेका सोरुमहरु सबैमा लागू हुनेछ । उक्त अफर […]
पाकिस्तानमा युवतीलेहरुले जिन्स पेन्ट लगाउन नपाउने..
December 31, 2021 autherLeaveaComment on पाकिस्तानमा युवतीलेहरुले जिन्स पेन्ट लगाउन नपाउने..
पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तस्थित एक विश्वविद्यालयले जिन्स लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालयले जिन्स लगाउन प्रतिबन्ध गरेको हो। सो प्रतिबन्ध पञ्जाबस्थित युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चरल फैसलावादले लगाएको हो। पाकिस्तानको संघीय शिक्षा निर्देशनालयले जिन्स लगाउनमा प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन दिएको एक महिनापछि पञ्जाबको विश्वविद्यालयले सो नियम लागू गरेको हो। शिक्षा निर्देशनालयले जिन्समाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै विद्यार्थीहरुमा […]
December 31, 2021 autherLeaveaComment on यस्तो ठाउँ, जहाँ कारको खेती हुन्छ
काठमाडौँ । के तपाइँले यस्तो खेत देख्नुभएको छ जहाँ बालीनाली होइन, कारको खेती हुन्छ ? अमेरिकाको नेवादामा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जहाँ कारहरु फल्दछन् । नेवादाको गोल्डफिल्ड नामक पहाडको समाचार हो यो । उक्त पहाडमा एकजना मानिसले कारको खेती गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन्। माइकल मार्क रिप्पी नामका व्यक्ति सन् २०११ मा त्यस ठाउँमा जमीनमा […]
December 31, 2021 autherLeaveaComment on पक्राउ परेका ‘लाउरे’ले दिए यस्तो बयान- ड्र,’ग नखाई स्टेज चढ्न सक्दिनँ
याप गीत गाएर चर्चित बनेका आशीष रानामगर ऊर्फ लाहुरेलाई कास्की प्रहरीले ला’गुऔ’षधसहित पक्राउ गरेको छ । ला’गुऔ’षध ब्रा’उनसु’गरसहित उनी बुधबार राति पोखरा जाल्पारोडबाट पक्राउ परेका हुन् । उनी ला’गुऔ’षध प्रयोगकर्ता भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।गायक लाहुरे, एकजना युवती र अरु २ पुरुष गरी ४ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कस्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुन्दर […]
December 31, 2021 autherLeaveaComment on संसारकै चिसो सहर, जहाँको तापक्रम माइनस ७१ डिग्रीसम्म पुग्छ
अन्टाकर्टिका : धुव्रीय क्षेत्र र उच्च हिमाली क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा पृथ्वीमा चिसो हुने स्थानहरु प्रशस्तै छन्। जाडोयाममा पृथ्वीको अधिकांश भू-भागतिर चिसो हुनेगर्छ। तर, मानवको वासस्थानसमेत रहेका वर्षभर जाडो अनुभव गर्नुपर्ने संसारका सबैभन्दा चिसो सहरहरु भने निकै कम छन् । तिनै चिसो सहरमध्ये एउटा हो, रसिया साइवेरिया क्षेत्रमा अवस्थित याकुत सहर । याकुत सहर संसारकै चिसो […]
छोरी सोनाक्षी सिन्हाको विवाहमा एक पैसाको पनि दाइजो नदिने शत्रुधनको घोषणा !
December 30, 2021 autherLeaveaComment on छोरी सोनाक्षी सिन्हाको विवाहमा एक पैसाको पनि दाइजो नदिने शत्रुधनको घोषणा !
बलिउडका चर्चित अभिनेता शत्रुघ्नन सिन्हा आफ्नो व्यावसायिक जीवनलाई लिएर खासै चर्चामा आउँदैनन्, तर उनको व्यक्तिगत जीवन भने अहिले पनि हेडलाइनमा छ । शत्रुघन सिन्हाले बलिउडमा उत्कृष्ट फिल्महरु दिएर ठूलो योग्दान गरेका छन् । तर, अहिले उनकी छोरी सोनाक्षी सिन्हा आफ्नो पर्सनल र प्रोफेशनल लाइफलाई लिएर चर्चामा छिन् । सोनाक्षी सिन्हा आफ्ना बुबा शत्रुघ्न सिन्हासँग एकदमै […]
December 30, 2021 autherLeaveaComment on बैंकमा पैसा राख्नु हुन्छ यो पढ्नुस्, यसरी चोरी हुँदै छ बैंक बाट पैसा चोरी
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–५ का प्रणयकुमार पोखरेलको विराटनगरस्थित एनआईसी एसिया बैंकको खातामा रहेको २९ हजार रुपैयाँ एकाएक गायब भयो । विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी पोखरेलको खातामा डिसेम्बर १७ मा प्राधिकरणले अघिल्लो महिनाको पेन्सन २९ हजार ४५३ रुपैयाँ ९९ पैसा जम्मा गरिदिएको थियो । तर उनले आफ्नो बैक खातामा सञ्चित रकम चलाउन नपाउँदै अरुले नै खाताबाट […]
संसद भवनमा सांसदहरुबीच कु’टाकुट, उपसभामुख भुइँमा ढले
December 30, 2021 autherLeaveaComment on संसद भवनमा सांसदहरुबीच कु’टाकुट, उपसभामुख भुइँमा ढले
अम्मान- जोर्डनको संसदमा सांसदहरुबीच हात हा’लाहाल र कु’टाकुट भएको छ । विवाद र चर्काचर्कीपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुबीच संसदभित्रै कु’टाकुट भएको हो । सभामुखले उपसभामुखलाई सदन छोड्न भनेपछि विवाद चर्किएको थियो । संसद भवनभित्र भएको विवादबारे सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोमा सांसदहरु एक अर्कालाई मु’क्का हानेको तथा उपसभामुख भुइँमा ढ’लेको देखिन्छन् । उसभामुख ढलेपछि केही […]
र्‍यापर लाउरे पोखरामा पक्राउ, यस्तो छ उनको कर्तुत !
December 30, 2021 autherLeaveaComment on र्‍यापर लाउरे पोखरामा पक्राउ, यस्तो छ उनको कर्तुत !
चर्चित र्‍यापर आशिष राना ‘लाउरे’ पोखरामा पक्राउ परेका छन् । लागू-औषध सेवनको अभियोगमा कास्की प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाका अनुसार लाउरे लागू औषध ब्राउन-सुगर सेवन गरेको भेटिएको थियो । उनीबाट लागू-औषध बरामद भने भएको छैन । पोखराको न्यूरोडबाट लाहुरेसहित ४ जना पक्राउ परेका थिए । ‘लागूऔषध सेवन गर्दै […]